black jack eterna-kote gloss fotsy mamirapiratra silicone
black jack eterna-kote gloss fotsy mamirapiratra silicone tampon-trano coating
Delaware fanatanjahan-tena hilokana ny vola miditra nianjera 36% avy ny tanteraka ny volana desambra taona 2018 ny $1.6 m tamin'ny volana janoary taona 2019, noho ny habetsaky wagered lavo $4.1 m (25%).
Ny volana desambra, Delaware Park naka $10.7 m eo amin'ny fanatanjahan-tena wagers, raha Dover ny Ratsy nanaiky $3.1 m sy Harrington Raceway naka $2.1 metatra bets. By fampitahana, Delaware Park naka $8.1 m eo amin'ny fanatanjahan-tena wagers tamin'ny janoary, amin'ny Dover ny Ratsy maka $2.1 metatra ny filokana sy Harrington Raceway fanekena $1.6 m black jack eterna-kote silicone coating. Ny volana desambra, nisy ny 352,037 wagers apetraka, raha 227,328 wagers napetraka tamin'ny volana janoary black jack eterna-kote gloss fotsy mamirapiratra silicone.
Mijery akaiky tamin'ny janoary, $10.2 m dia nandresy indray ny mpanjifa; ny vokatry ny $1.6 m ao niteraka fidiram-bola dia $ny 900 000 latsaka, raha oharina amin'ny teo aloha volana black jack eterna-kote vs henry tropi-mangatsiatsiaka. Satria fanatanjahan-tena wagering dia dalàna ao ny fanjakana, Delaware Park efa nanaiky $98.9 m ao wagers ary ny telo dian-tongotra mitambatra efa niteraka fidiram-bola ny $11.8 m. black jack eterna-kote gloss fotsy mamirapiratra silicone tampon-trano coating.